Nhau - Kushandiswa kwesimbi isina tsvina firita chinhu mucoalescer
Stainless simbi firita chinhu chakakamurwa kuita skrini firita chinhu, sintered akanzwa firita chinhu uye sintering firita chinhu. Iyo yakasvibirira sintered mesh firita chinhu chakagadzirwa nesimbi isina sintered sintered mesh. Stainless simbi firita chinhu chinoshandiswa mumhando dzakasiyana dzekusefa kuti uwane yakanaka yekusefa maitiro. Anping Hanke Filter Technology Co, Ltd Nemidziyo yekugadzira yakakwana uye yakakwana nzira yekugadzira, isu tinopa ese ese mafirita ekugadzirisa mhinduro kune vatengi vedu.
Nhasi, ndoda kuzivisa mamwe marudzi esimbi simbi firita element application, coalescence dehydration mafuta firita
Kuvapo kwemvura mu hydraulic lubrication system kunokonzera kusanganiswa kwemafuta, kuita kuti oiri iwedzere, kudzikama kwefirimu yemafuta, kudzikamisa girizi, kukonzera mafuta ekushambadzira uye kupolita kugadzira macromolecule, shandura oiri viscosity, fomu organic acids, uye wozokanganisa iyo simbi pamusoro, kudzikisa kana kurasikirwa ne dielectric simba remafuta. Kune echinyakare kusefa uye yekuparadzanisa michina, zvakanyanya kunetsa kupatsanura imwe mvura kubva kune imwe. Iyo coalescence yekuparadzanisa oiri firita yakagadzirwa neXinxiang Rixin kambani inosanganisa chaiyo filtration uye inoshanda dehydration, iyo inogona kunyatso bvisa iyo particulate marara, emulsified mvura uye yemahara mvura mumafuta pasina kukuvadza hunhu hweiyo yekutanga chigadzirwa. Kune iwo oiri ane huwandu hwakawanda hwemvura, iyo yekuparadzanisa mhedzisiro inonyanya kushamisa, uye iyo yekumhanyisa kumhanya iri yakati wandei kune gumi nemaviri yenguva yechinyakare yekuparadzanisa kumhanya
1. Iko kushandiswa kwe coalescence kupera mvura mafuta firita inosanganisira:
(1) Kunatswa kwemafuta turbine uye oiri transformer;
(2) Kubviswa kwemvura uye kusvibiswa kubvisa kusefa kwemafuta mu hydraulic lubrication system;
(3) Unganidza iyo hydraulic lubrication system yekuvandudza hutsanana hweiyo system.
Iyo yehunyanzvi musimboti we coalescence kupera mvura mafuta firita ndeiyi: dzakasiyana zvinwiwa zvine akasiyana pevhu makakatanwa, uye kana iyo mvura ichiyerera nepadiki gomba, idiki iyo yekumusoro kusagadzikana, iyo inokurumidza kupfuura inopfuura kumhanya. Kana iyo yakasanganiswa mvura yezvikamu zvakasiyana ichiyerera ichipinda, inotanga kupinda mucoalescence firita chinhu. Iyo coalescence firita element ine akawanda-masara ekusefa epakati, uye pore yayo dhayamita inowedzera nhete neyakaenzana. Nekuda kwemusiyano wekupokana kwepasirese, mafuta anodarika nepasefa nekukurumidza, nepo mvura ichinonoka. Zvakare, nekuda kweiyo hydrophilic zvinhu zve coalescence firita chinhu, iwo madonhwe emvura madiki anoshambadzwa pamusoro peiyo firita, zvichikonzera kuwirirana kwemadonhwe emvura. Pasi pekuita kwesinetic simba, madonhwe madiki anomhanya kuburikidza nekuvhura uye zvishoma nezvishoma anogadzira madonhwe mahombe, uye ozogadzikana pasi pechiitiko chegiravhiti uye akapatsanurwa nemafuta. Mushure mekubatanidza mafuta mushure mechinhu chesefa, kuchine madonhwe madiki emvura anoenda kumberi kune yekuparadzanisa firita chinhu pasi pechiito che inertia. Iyo yekuparadzanisa chinhu inogadzirwa neakasarudzika hydrophobic zvinhu. Kana oiri ichipfuura nepakati pechinhu chekuparadzanisa, iwo madonhwe emvura anovharika kunze kwechinhu chesefa, ukuwo mafuta achidarika nepakati pechinhu chekuparadzanisa uye choburitswa kunze.
2. Hunhu hwecoalescence dehydration mafuta firita system ndeaya anotevera:
Inobatanidza mabasa maviri eiyo chaiyo filtration uye yakanyanya kushanda kupera simba, uye inoshandisa yepamusoro "coalescence kupatsanura" tekinoroji yekushomeka, iyo ine yakakwira yekushomeka kwekuita uye kugona kwakasimba. Kunyanya yekuparadzaniswa kwemvura yakawanda mumafuta, ine mikana isingaenzanisike yenzira yekutsvaira uye nzira yecentrifugal, iyo inogona kutyora ese emafuta-emvura emvura emvura mukati; Kubudikidza nekusefa kweiyo PARTICIPLE filtration system, hutsanana hwepakati hunogona kudzorwa zvakadzikama mune inodiwa mamiriro ehurongwa, kuitira kuti uve nechokwadi chekuchena kwemafuta: izvo zvepanyama uye zvemakemikari zvimiro zvemafuta hazvina kuchinjwa, uye hupenyu hwehupenyu hwemafuta hwakareba; iyo yekushandisa simba idiki uye mutengo wekushanda wakaderera; iyo yekumisikidza system yakanakisa uye kuenderera kwekushanda kwekuita kwakasimba, kunoenderana neinternet oparesheni.
Particle filtration system: iyo firita midhiya inogadzirwa ne * * firita zvinhu, uye dhizaini yenzvimbo hombe yekusefa inogona kunyatso kusefa kunze kwakanyanya kwazvo tsvina uye kuita zvigadzirwa zvemafuta zvisvike pakuchenesa kwakanyanya.
Coalescence system: iyo coalescence system inoumbwa neboka re coalescence firita zvinhu, saka iyo coalescence firita musimboti inotora yakasarudzika polar mamorekuru mamiriro. Mvura yemahara uye emulsified mvura mumafuta inounganidzwa mumadonhwe makuru emvura mushure mekupfuura nepakati pechinhu chesefa, uye wozogadzika mutangi rekuchengetera mvura pasi pechiitiko chegiravhiti.
Kuparadzanisa system: iyo yekuparadzanisa firita chinhu cheiyo yekuparadzanisa system inoitwa yakakosha hydrophobic zvinhu. Mafuta paanopfuura nepakati pechinhu chesefa, madonhwe emvura anovharika pamusoro pekunze kwechinhu chesefa uye obatana pamwe chete kusvikira vagara mutangi rekuchengetera mvura nekuda kwesimba.
Drainage system: iyo yakakamurwa mvura inochengetwa mutangi rekuchengetedza mvura. Kana iyo interface yekukwirisa yasvika pane yakatarwa kukosha, vhura vharuvhu kuti ubudise mvura kusvikira yadonhera kune yakaderera mvura mwero. Vhara vharuvhu uye umise iyo drainage.
3. Muchina uyu une nhanho shanu dze filtration system
(1) Kirasi * * kubvisa kusefa kunogadzirirwa pachiteshi chekutsveta mafuta. Iyo yakakora firita inodzivirira pombi yemafuta uye inowedzera hupenyu hwebasa reiyo hombe firita.
(2) Chikamu chechipiri pre firita yakaiswa kumusoro kweiyo coalescer. Izvo hazvigone chete kuwedzera hupenyu hwe coalescer, asi zvakare kudzikisira zvirimo zvezvimedu mune yakasvinwa mvura.
(3) Yechitatu coalescence firita inoita kuti mvura iri mumafuta inyure uye inyure.
(4) Yechina nhanho yekuparadzanisa firita inoenderera ichivhara madonhwe emvura mumafuta kuti vaparadzane.
(5) Kubudirira kwepamusoro uye yepamusoro-firita midhiya, inogona kushandiswa kuchenesa mafuta.
Izvo zviri pamusoro ipfupi sumo ye coalescence kupera mvura mafuta firita yesimbi isina tsvina firita chinhu.